» ल्होछारमा कलाकारहरुले बकैया तताउने
१ माघ २०७६, बुधबार १०:४१
Children perfomadance as they celebrate Sonam Lhosar Festival at Bhrikutimandap in the capital on Thursday. January 18 2018. PHOTO/SANJOG MANANDHAR
मकवानपुर । मञ्जुश्री सम्वत् २८५६ औँ सोनाम ल्होछार मुसा वर्ग (जीवा ल्हो) को अवरमा माघ १० गते थुप्रै राष्ट्रिय तथा स्थानिय कलाकारहरु बकैया आउने भएको छ । बकैया ६ जुनेली बस्ती, सुधामा हुने विशेष साँस्कृतिक कार्यक्रमको हाल तीव्र रुपमा तयारी अघि बढिरहेको आयोजक गौतम बुद्ध पर्यटन पार्क बकैयाले जनाएको छ ।
गौतम बुद्ध पर्यटन पार्कका अध्यक्ष तारा भोम्जनको संयोजकत्वमा ल्होछार कार्यक्रम मूल समारोह समिति गठन भएको छ । कार्यक्रम व्यवस्थापनकालागि विभिन्न उपसमितिहरु बनाइएको छ । आर्थिक उपसमितिका संयोजक धनबहादुर लुङबा, प्रचार प्रसारमा मोतिलाल सिङगर, कलाकार संयोजक हिमाल लुङबा, सेलो नृत्य प्रतियोगिता संयोजक अमृतकुमार लुङबा र अतिथी तथा मञ्च व्यवस्थापनमा सुशन भ्लोन रहेको छ ।
खुल्ला सेलो नृत्य प्रतियोगिताकालागि आयोजक समितिले सम्पूर्णमा सहभागिताकालागि आव्हान गरेको छ । सेलो नृत्य प्रतियोगितामा प्रथम् हुने टीमले ५ हजार, दोस्रोले ३ हजार, तेस्रो हुने टीमले २ हजार प्राप्त गर्ने आयोजकले जानकारी दिएको छ ।
कलाकारहरु विशाल कल्तन, सेलो लोकदोहोरी गायक मिना लामा, प्रकाश तितुङ, साम्तेन मोक्तान, हिमाल लुङबा, सुदिप ङ्यासुर र रमा घतानीको प्रस्तुती रहने छ ।
आयोजक टीमको संयोजनमा माघ १० गते साँझ मुसा वर्ग (जीवा ल्हो) को स्वागतमा दीपावली गरिने जनाएको छ ।